Ikhithi yokufumanisa isifo se-nucleic acid
Le mveliso isetyenziselwa ukufumanisa ngokukhawuleza kunye nokuhlolwa kwezifo zezilwanyana.
Olu luhlu luyimveliso ye- "NAVID", inkampani engumzali kaJanma gene.
Le mveliso isetyenziselwa ukufumanisa ngokukhawuleza kunye nokuhlolwa kwezinto ezincinci zokutya ezithwala ukutya ezifana ne-staphylococcus aureus, i-Escherichia coli O157: H7, i-listeria monocytogenes, i-vibrio parahaemolyticus, i-salmonella kunye ne-bacillus cereus.
I-MP yeNucleic Acid Detection Kit isetyenziselwa ukufumanisa i-Mycoplasma pneumoniae DNA kwi-nasopharyngeal swabs kunye ne-bronchoalveolar lavage.
Le mveliso isetyenziselwa ukufumanisa umgangatho we-influenza A intsholongwane kunye ne-virus ye-virus ye-B ye-nucleic acid kwi-swab yomqala kunye ne-sputum yezigulane kwi-vitro.
Itekhnoloji ye-ASEA, isizukulwana esitsha se-acidic yeplatform yokufumanisa ngokukhawuleza ngokuzimeleyo okuphuhliswe yinkampani, ichanekile, ilula kwaye iyakhawuleza itekhnoloji ye-asidi yokufumanisa ngokukhawuleza, enokugqibezela yonke inkqubo ukusuka "kwisampulu kwiziphumo" kwimizuzu engama-35, kwaye uqaphele uphuculo olubalulekileyo lokuchongwa kwe-asidi ye-asidi ukusuka "kwinqanaba leyure" ukuya "kwinqanaba lomzuzu".
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iikiti zeChina ezikhawulezayo zovavanyo, I-Canine Parvovirus (Cp), Ikhithi yasimahla yokuSusa, Ikhithi yokuKhupha iAcid Nucleic ekhawulezayo,